Samsung Pay nwere ihe ruru nde mmadụ iri na anọ na obodo iri abụọ na ise | Gam akporosis
Paymentkwụ ụgwọ n'elu ikpo okwu Samsung ịkwụ ụgwọ Ọ dịla kemgbe 2015 wee nyefee azụmahịa ọtụtụ. Obere akpa dijitalụ etoola, kemgbe ọtụtụ afọ, isi ọrụ ya na, dị ka data ndị ọrụ si dị, ugbu a nwere nde 14 ndị ọrụ n'ụwa nile ma na-etinyere na ihe karịrị mba 25.
Samsung Pay is dakọtara dị iche iche Samsung phones na, ọ bụ ezie na ya ọrụ isi ka toro n'ike n'ike ihe karịrị 4 afọ kemgbe ya mpụta mbụ, data na-egosi na ọrụ ịkwụ ụgwọ kọntaktị ahụ na-ewu ewu karị na obodo Samsung nke South Korea, dika aturu anya.
Mba Eshia gụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80% nke ịkwụ ụgwọ ya na-anọghị n'ịntanetị. Dabere na Ọrụ Nlekọta Ego. Onye ọrụ ụlọ ọrụ ahụ kwuru na Samsung Pay gafere 40 puku ijeri South Korea merie (KRW), ọnụ ọgụgụ nke ihe ruru ijeri dollar 33.7, na azụmahịa emere na Eprel 2019, yana 25% nke azụmahịa n'ụdị ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị.
Kpọtụrụ kọntaktị na Samsung Pay
Samsung Pay incorporates nso ubi nkwukọrịta teknụzụ (NFC ma ọ bụ ndị a maara nkewapụta dị ka 'Near Field Communication') na MST (Secure Magnetic Transmission). Nke a emeela ka ọrụ ahụ dakọtara n'ọtụtụ ebe nke nzụta, ebe ndị nwe ha nwere ike iji teknụzụ NFC na-enweghị ịkpọtụrụ (akpaghi aka) dị ka teknụzụ magnet nke ọtụtụ kaadị na-eji.
Gwọ ịkwụ ụgwọ na-adaba na ụdị nke Galaxy S, yana ụdị nke Galaxy A na J. Ọrụ ịkwụ ụgwọ dịkwa na Samsung Gear smartwatches na sistemụ arụmọrụ Tizen, nke ezubere maka naanị ha.
BBVA mechara rute Samsung Pay na Spain
Ugbu a, I nwekwara ike iji Samsung Pay iji tinye / wepụ ego site na ATM, na mgbakwunye na ọ na-akwado ịkwụ ụgwọ site na mbufe na kaadị akwụ ụgwọ, yana PayPal.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Pay nwere ihe ruru nde mmadụ iri na anọ na mba iri abụọ na ise